မကောင်းသော TINDER ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိများ - ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင်ဖြစ်ပွားသောဘေးဥပဒ်ကဲ့သို့ရှောင်ရှားရန် TINDER ဇီဝတိုင်း - သတင်း
ချိန်းတွေ့ခြင်း app ၏ဇီဝနှင့်မှားယွင်းနိုင်အောင်အများကြီးရှိပါတယ်။ သင်ကိုယ်တိုင်၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်အချစ်ဇာတ်လမ်းကိုသင်ရောင်းရန်နှင့်ကောင်လေးကအချို့သောမကောင်းသောအလုပ်များလုပ်နေရန်သင့်အားကူညီရန်ရည်ရွယ်သည်။
တီထွင်ဖန်တီးမှုအတွက်လိုအပ်ချက်သိပ်မများလှပါ။ ဒါကြောင့်သင်ရိုက်သည့်အခုတ် ၂၀ အတွင်းတိုင်းတွင် ၅ ကြိမ်အတူတူပင် ၅ ကြိမ်တွေ့မြင်နိုင်သည်။ ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်ကျနော်တို့ Tinder ဘက်လိုက်တဲ့ခွေးတွေကိုပြောခွင့်မပြုရင်တိုင်းပြည်ရဲ့တစ်ဝက်လောက်တော့ဆုံးရှုံးသွားမှာပါ။
အချို့သောကြောက်မက်ဖွယ်ဇီဝအမှားများသည်အချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်းကွယ်လွန်သွားခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်အားကျေးဇူးတင်ပါသည်၊ သို့သော်အချို့သူများသည်ယနေ့ထိရှင်သန်နေဆဲဖြစ်သည်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင်ရှောင်ရှားရမည့်သူများမှာ -
မည်သည့် Peep Show ကိုးကား
ဒါကဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေလျှင်၊ သင်၌ဟာသဉာဏ်ရှိကြောင်းအထောက်အထားမဟုတ်ပါ။ သင် Ergonomic စီမံခန့်ခွဲမှုကီးဘုတ်ကိုးကားကိုသုံးလျှင်အပိုဆု cringe အချက်များ။
အမြင့်, ပြီးတော့ 'သင်ကဂရုစိုက်လျှင်' 'ဟုပြောသည်
သင်ပိုမိုဆားငန်နိုင်မလား မင်းက 5'8 လို့မင်းဝန်ခံပြီးမင်းကိုဆက်သွားပါ။
(သို့) 'flip side' 5'10 လို့ခေါ်တဲ့ယောက်ျားတွေကိုသူတို့ဘယ်လိုခေါ်သလဲသိလား။ သူငယ်ချင်းများ '
အိုကေ။ ငါအရင်ကပြောခဲ့တာကိုငါသိတယ်၊ ဒါပေမယ့်အရှက်မကွဲစေနဲ့!
Wow ဟားဟား၊ မင်းအရမ်းလေးလွန်းတဲ့ဗီယက်နမ်မှာလေးလနေခဲ့ဖူးတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါလောကရဲ့ရုပ်ပြောင်ကိုကျော်မကြည့်နိုင်ခဲ့ဘူး ဒါ့အပြင်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကိုမင်းတို့ပြောချင်တာကိုနားထောင်ချင်စရာမလိုပါဘူး၊ နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့နေ့စွဲတစ်ခုသွားတဲ့အချိန်မှာပိုင့် ၂-၅ နှစ်ပိုင့်တွေအတွက်။ လက်ဝဲပွတ်ဆွဲ။
'ငါ့ကိုချိန်းတွေ့ခြင်းရဲ့အခွင့်အရေး - ငါ့ခွေး'
သို့မဟုတ်ပိုမိုဖရိုဖရဲစွမ်းအင်တစ်ခုအတွက် 'ငါ့ခွေးဟာမင်းထက် cuter' လို့ရိုးရှင်းစွာပြောတယ် ဒါမှမဟုတ် 'ငါခွေးကိုမင်းထက်ပိုကြိုက်' တယ်။ နည်းနည်းချစ်ကြတယ် ချစ်သူ ။ SooOoOoOo မူရင်း။
ငါနောက်ဆုံးတကြိမ်ပြောလိမ့်မယ် ခွေးများ Are ။ မဟုတ်ဘူး။ A. ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး။ စရိုက်။
ငါ့ကို memes ပို့ပါ
သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သူကပြောတယ် memes ရှာပါ။
ကျွန်တော် (ဒီအက်ပလီကေးရှင်း) မှလွဲ၍ အခြားနေရာတွင်ကျွန်ုပ်တွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်းကျွန်ုပ်၏မိဘများကိုပြောပြလိမ့်မည်
ငါတို့ရဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာအကြောင်းမင်းလိမ်ပြောချင်သလား။ လူသာပိုင်ဆိုင်ရုံသာမကကမ္ဘာပေါ်ရှိလူတိုင်းသည်တစ်ချိန်ချိန်တွင်ချိန်းတွေ့ခြင်းအက်ပလီကေးရှင်းကိုအသုံးပြုကြရသည်။ ဖြစ်ကောင်းသင့်ရဲ့မိဘများ (သင်ကချိုးဖျက်ဖို့စိတ်မကောင်း) ပါဝင်သည်။
တူဖတ်: ငါကျိန်းသေသငျသညျ outdrink နိုင်ပါတယ်။ သို့မဟုတ် Hinge တွင်မေးခွန်းသုံးခုစလုံးအတွက်အဖြေသည် Tequila ကဲ့သို့သောအရာဖြစ်လိမ့်မည်။ ရယ်စရာ! သင်ကိုယ်တိုင်ပြောရန်လိုသလား။ ငါတစျ ဦး အဘို့, စိုးရိမ်ပူပန်မိပါတယ်လို့ပဲ။
Gals, ငါ့ကိုဒီနေရာမှာနားထောင်: ပီဇာချစ်ခြင်းမေတ္တာအသစ်သို့မဟုတ်မူရင်းမဟုတ်ပါဘူး!
မာရ်နတ်ရဲ့စာ။ ဝေးဝေးနေပါ။ ပေါင်းပင်များကြောင့်မဟုတ်ဘဲ၎င်းကိုရည်ညွှန်းသည့်အလွန်နည်းပါးသောကြောင့်နှင့်သင်ကိုယ်တိုင်၏စိတ် ၀ င်စားစရာအကောင်းဆုံးအရာဖြစ်သည်ဟုသင်ထင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ငါ asf ပျင်းစရာကောင်းပါတယ်အရာ
အိုကေ, မထိုက်မတန်ပေမယ့်အခြေခံ။ သင်၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတစ်ခုလုံးသည်အားကစားခန်းမသို့သွားသည်ဟုလည်းသူကမကျေမနပ်ဖြစ်သည်။ မင်းအတွက်ဒါမှမဟုတ်မင်းအတွက်ပရိုတိန်းလှုပ်ခြင်းကိုငါမသောက်ဘူး။
အဘို့အလတ်ထူးဆန်းပြင်းထန်သောရှည်လျားဇီဝ Softboi Beam Me Up
မေ့မြောနေခဲ့လား ဒီဟာ ၂၀၁၄ မှာသေတယ်။
Brexit, အလုပ်သမားသို့မဟုတ် Tory ဆက်စပ်ဘာမှ
ကျော်ရ, သူတို့အနိုင်ရခဲ့သည်။ အကယ်၍ မင်းကဒီဟာကိုဆက်ပြီးဆွဲနေမယ်ဆိုရင်ငါတို့ရှုပ်နေမှာမဟုတ်ဘူး။ ဝမ်းနည်းပူဆွေးမှုအဆင့်ငါးဆင့်ကိုကြည့်ပြီးအမှန်တကယ်သူတို့အားဖြတ်သန်းပါ။
ပထမ ဦး စွာသင်နှင့်သင်နှင့်လိုက်ဖက်သောသူများကိုသင်စာသားမသိသောချိန်းတွေ့သည့် app တစ်ခုအတွက်ဤသည်အလွန်ပြင်းထန်သည်။ မင်္ဂလာဆောင်ရက်စွဲများခြောက်လ -In အမျိုးအစားအရာဖြစ်ကြ၏။ မင်းဟာအလားအလာရှိတဲ့ပွဲစဉ်ကိုအထီးကျန်ဆန်လွန်းတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သုံးတာနဲ့တူတယ်။ မဟုတ်တစ် ဦး hundy ရာခိုင်နှုန်းက Vibe ။
ငါတို့ရှိသမျှသည်ချမ်းအေးသည်! သင်အထူးမဟုတ်ပါ။ သို့မဟုတ်မူရင်း!
မည်သည့်အချက်မှာသင်၏ snapchat အပါအဝင်
မင်းအသက် ၁၅ နှစ်လား
ငါ့အမိကိုသွေးဆောင်။ သတ်မည်လော။ အိုးမဟုတ်ပါငါရ။ နေဆဲခြေဆွံ့သောသူ။
၎င်းသည် ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် (၈) ဖြင့် MSN အခြေအနေရေးသားခြင်းနှင့်တူညီသည်။
အက္ခရာ တင်၍ အထိုးခံရ (အပ် emoji)
အထက်ခွေး memes အချက်ကိုကြည့်ပါ။
• 'Fleabagging' သည်သင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနေရန်လိုအပ်သည့် 2020 အသစ်ချိန်းတွေ့သည့်လမ်းကြောင်းသစ်ဖြစ်သည်
• 2019 ခုနှစ်တွင်ဗြိတိန်နိုင်ငံရှိ Tinder တွင်လက်ျာလက်ဖြင့်ပွတ်ဆွဲအရှိဆုံးသူများနှင့်တွေ့ဆုံပါ